Fiangonana Ôrtôdôksa eto Madagasikara - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiangonana Ortodoksa eto Madagasikara)
Ny Fiangonana Ôrtôdôksa eto Madagasikara dia fiangonana kristiana miorina eto Madagasikara izay isan' ny Fiangonana tatsinanana efa tafasaraka tamin' ny Fiangonana Katôlika tany aloha, niorina teto amin' ny Nosy efa tamin' ny taona 1930 nefa tamin' ny taona 1999 vao nahazo fanlatoavana avy amin' ny fanjakana malagasy. Mino ny Trinite ny Ôrtôdôksa malagasy. Fehin' ny Fiangonana Ôrtôdôksan' i Aleksandria sy Afrika manontolo izy.
Ny Patriarkatan' i Aleksandria sy Afrika Manontolo
1.1 Ondry tsy misy mpiahy
1.2 Ny mazava atsinanana
1.3 Ireo solofo dimbin' ny ala: pretra sy seminarista ary masera malagasy ortôdôksa
2 Ny asa pastôraly sy sôsialy
Efa tany amin' ny taon-jato faha-19 tany ho any no tonga teto Madagasikara ny finoana ôrtôdôksa. Tamin' izany anefa, mbola tsy nisy Malagasy ôrtôdôksa fa ireo Grika sy Bolgara ary Rosiana no mpino ôrtôdôksa teto. Tsara ho marihina anefa fa tsy nisy pretra tamin' izy ireo fa samy kristianina tsotra avokoa.
Ondry tsy misy mpiahyHanova
Ny taona 1928, natsangana ho archidiocèse i Johannesburg (Afrika Atsimo) ary nampidirina tao anatin' izany i Madagasikara. Araka izany, naniraka pretra ho aty Madagasikara ny archevêché tao Johannesburg mba hanentana sy hanome vatsim-panahy ny Kristianina ôrtôdôksa. Tsy naharitra anefa ny fitsidihana nataony teto.
Ny taona 1930 dia nanangana trano fiangonana ireo Kristianina ôrtôdôksa tao Antananarivo (Behoririka) ary natao eo ambany fiarovan' ny "Dormition de la Mère de Dieu". Na vita aza ny trano fiangonana dia mbola tsy nahazo pretra ihany ny Kristianina ôrtôdôksa malagasy.
Ny taona 1948 dia nandefa pretra hipetraka maharitra eto Madagasikara ny archevêché any Johannesburg. Pretra iray ihany anefa no nalefany hisahana sy hitantana ny fiangonana ôrtôdôksa manerana an' i Madagasikara izay efa nisy trano fiangonana roa nitsangana, satria ny taona 1955 dia vita ny trano fiangonana tany Mahajanga arovan' i Md Nicolas. Taona vitsy taorian' izay dia tsy nisy pretra indray i Madagasikara rehefa niverina any Afrika Atsimo ny pretra niasa teto, noho ny antony maro.
Ny taona 1966 dia nandefa pretra iray tompon-toerana teto Madagasikara ny archevêché any Johannesburg. Roa taona monja anefa no niasan' io pretra io dia nody izy. Nanomboka ny taona 1968 dia tsy nanana pretra ny Kristianina ôrtôdôksa teto Madagasikara. Taona vitsy taorian' io anefa dia natsangana ho archevêché i Zimbabwe (miray amin' ny Patriarkatan' i Aleksandria) ary nafindra tao indray i Madagasikara. Na dia nitambatra tao amin' ny archevêchén' i Zimbabwe aza i Madagasikara dia mbola tsy nahazo pretra ihany.
Ny mazava atsinananaHanova
Ny taona 1994, pretra aostralianina iray tonga handany fotoam-pialan-tsasatra eto Madagasikara no nahita ny fiangonana tao Behoririka (Antananarivo) sy ny Kristianina nivavaka tsy nisy pretra. Vokatr' izany, nalahelo mafy ity pretra aostralianina ity ka naniry ny ho misiônera aty Madagasikara. Ny volana Jolay 1994, nivaly ny faniriany. Iray volana monja taorian' io anefa dia efa nisy Kristianina ôrtôdôksa malagasy telo lahy niroso hatao batemy tao amin' ny fiangonana "la Dormition de la Mère de Dieu" tamin' ny 31 Aogositra 1994. Izy telo lahy ireo kosa no tonga pretra malagasy ôrtôdôksa voalohany ary nohamasinina ny volana Martsa 1995 tany Zimbabwe.
Ny 23 Semptembra 1997 no nohamasinina ho evekan' i Madagasikara ilay pretra aostralianina misiônera. Maty tamin' ny taona 2004 ity eveka ity ary i Mgr Ignocius (teratany grika) no nandimby azy.
Tamin' ny 10 Mey 1999 no neken' ny fanjakana malagasy ho ara-dalàna teto Madagasikara ny fijoroan' ny fiangonana ôrtôdôksa na dia efa niforona tamin' ny taona 1930 aza.
Ireo solofo dimbin' ny ala: pretra sy seminarista ary masera malagasy ortôdôksaHanova
Tamin' ny taona 2005 dia efa niisa 54 eo ireo paroasy ôrtôdôksa izay mitsinjara amin' ny vicariats telo eto Madagasikara dia ny vicariat Toliara, ny vicariat Fianarantsoa ary ny vicariat Antananarivo. Nisy 12 ireo pretra malagasy, "sous-diacre" iray ary seminarista fito izay samy tany ivelan' i Madagasikara avokoa.
Tamin' ny taona 2005 dia efa nisy masera malagasy ôrtôdôksa iray sy regardantes roa, samy mbola nipetraka any andafy avokoa ireo. Nisy ny fikasa hanangana mônastera eto Madagasikara (ao Mantasoa) ho an' ireto masera ireto.
Ny asa pastôraly sy sôsialyHanova
Raha amin' ny lafiny fanabeazana dia mandray anjara feno ny fiangonana ôrtôdôksa eto Madagasikara. Tamin' ny taona 2005 dia efa nanana sekoly fanabeazana fototra miisa sivy sy sekoly fiofanana amin' ny asa (technique) iray any Toliara ny fiangonana. Tsiahivina koa fa manana hôpitaly eto Madagasikara ny fiangonana ôrtôdôksa.
Efa lasa archevêché i Madagasikara ary miaraka aminy ny nosy La Réunion sy i Maorisy. Samy mivondrona ao amin' ny patriarkatan' i Aleksandria ireo, izay tantanan' ny patriarka Théodore.
Fiangonana kristiana eto Madagasikara
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_Ôrtôdôksa_eto_Madagasikara&oldid=1039823"
Dernière modification le 10 Novambra 2021, à 05:37
Voaova farany tamin'ny 10 Novambra 2021 amin'ny 05:37 ity pejy ity.